Global Voices teny Malagasy » Fongorin’i Bahrain Ireo Hetsi-bahoaka, Fa Kosa Tsy Ny Fanohanana Ny ISIS · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2014 1:58 GMT 1	 · Mpanoratra Noor Mattar Nandika Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Bahrain, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Amin'ny fomba ofisialy i Bahrain dia ampahany ao anatin'ny fiaraha-miasa ara-miaramila any amin'ny faritra miady  amin'ilay zanaka an-tranon'ny Al Kaida (Al Qaeda), mahery fihetsika ary mpanao hery famoretana, fantatra amin'ny anarana hoe ISIS, izay naka an-keriny faritra midadasika be any Iràka sy Syria. Kanefa ny fitondram-panjàka ao amin'ilay nosy dia toa mbola manakipy ny masony amin'ireo mpanaraka ny ISIS (fanjakana islamika), mpamatsy ara-bola ary ireo mpamafy hevitra mpampisara-bazana (sekta) ao anatin'ny fireneny. Milaza ireo mpitsikera ny governemanta fa manampy azy ireo hamorona fihenjanana ao amin'ny sekta io fihetsika io, fihetsiky ny governemanta izay zatra nampangina ireo mpikatroka mafana fo miady ho an'ny demokrasia ao Bahrain , nitarika ny hetsika ho amin'ny fanovàna hatramin'ny taona 2011.
Fanentanana iray vao haingana tao amin'ny media sosialy no mampiseho ohatra iray mazava tsara momba ny fanohanana mitombo hatrany ny ISIS ao amin'ilay fanjakàna nosy kely. Ao anatinà lahatsary iray ao amin'ny YouTube , miantso ireo Bahraini hafa ireo Bahraini efatra mpikambana ao amin'ny ISIS mba handray fitaovam-piadiana ary hanjohy ny ady hanohitra ireo “mpampihorohoro” mitondra azy ankehitriny, ny fianakaviana mpanjaka Sunnita Al Khalifa, ary ireo vahoaka Shiita maro an'isa ao amin'ny firenena. Na dia teo aza izany, tsy nisy fanadihadiana nataon'ny fanjakana momba ilay lahatsary.
Tsy nisambotra ireo namorona ireny lahatsary ireny ilay sampanamiady amin'ny fampihorohoroana atao ety anaty Aterineto ao amin'ny firenena, izay mikendry isan'andro amin'ny fisamborana sy fampidirana am-ponja ireo mpitoraka bilaogy , ary ireo mpiaro ny zon'olombelona  .
Mba hanomezana ohatra hafa iray, nisy fotoana i Abdulla Mubarak Albinali, rahalahin'i Turki Albinali, ilay “mufti” na olona mpiandraikitra ny fandikàna ny lalàna Silamo ho an'ny ISIS, dia namoaka ny votoaty manohana ny ISIS  tety anaty Aterineto. Nanontanintanian'ireo manampahefana Bahraini vetivety monja fotsiny izy, fa tsy nosamborina. Ilay rahalahiny iray, Mohammed Mubarak Albinali, no “Abu Alfida Alsalami” ilay mpiadin'ny ISIS ao amin'ilay antso natao tamin'ny YouTube hitàna fiadiana nolazaina tery aloha. Samy nahazo dera  avy amin'ny rainy, Mubarak Abdulla Albinali, izy mirahalahy, izay lazain'ny maro ho lietnà kolonely .
Mino ve ireo olona ireo fa tsy hiatrika ny fiantraikan'ny zavatra ataony mihitsy? Nametraka io fanontaniana io ireo Barhaini mpiaro ny zon'olombelona  mandinika ny zava-miseho. Maro ireo mino  fa tia manome vahana ny tantaranà sekta ny fitondràna, mba hanapotehana ireo hetsika tsy miankina itakiana fiarovana ny zon'olombelona bebe kokoa any Bahrain.
Mety ho sarotra ho an'ireo Bahraini mpitondra ny hanohitra ny ramatahoran'ireo vondrona mahery fihetsika — sady amin'izay koa, niara-niasa navitrika taminy ihany izy ireo fahiny. Voaantso ho anisan'ireo nanao hetsi-pamoretana ireo vondrona mahery fihetsika, tamin'ny fatroaram-bahoaka  ny taona 2011 izay nahitàna olona an'arivony maro nidina an-dalambe nitaky fanovàna karazany maro sy fahalalahana avy amin'ny governemanta.
Nanosika ny firoboroboan'ny sekta ny fanampenam-bava, fanaovana haza lambo  ireo “mpamadika”, ny fanapotehana ireo trano fivavahan'ireo Shiita  sy fanadrohadroana ary fanompàna avy amin'ireo hery mpitandro filaminana . Nila ireo vondrona izay manohana ny fivakivakisana ho sekta io, ary nilaina tamin'izany ireo vondrona tena faran'izay mpandàla fisamantsamahana.
Ny tena marina, Turki Albinali, ilay “mufti” an'ny ISIS voalaza etsy ambony, dia nahazo ny lazany tamin'ny naha-mpikambana azy tao amin'ny hery mpanohitra ny revolisiônera izay nampiasaina hanohitra ireo hery nitaky fanovàna tany Bahrain. Ao anatin'ny lahatsary manaraka eto ambany, ny taona 2011, mikabary izy ho an'ny vondrona iray any Busaiteen, miantso azy ireo mba “hiaro” ny firenen'izy ireo amin'ireo “mpamadika” — ho entiny manondro ireo mpanao hetsika mitaky ny demôkrasia any Bahrain. Ao anatin'ireo vahoaka mihaino dia misy ireo olona mitazona famaky, hazo ary sabatra. Nahazo ny tso-dranon'ireo mpiasam-panjakàna ambony sasany izay nitsidika  ilay famoriam-bahoaka tany Busaiteen mihitsy aza i Albinali. Na izany aza, tsy mbola niatrika fanilikilihana avy amin'ny fitondràna izy ireo, satria manaraka ny fitsipika fitantanana ny sekta nampiasaina hatramin'izay izy ireo.
Notrandrahan'i Turki Albinali ilay sehatra nomena ny mpanao an-tendrony (mahery fihetsika). Nanao toriteny fanao amin'ny andro Zomà izy, manainga  mba hankahàla ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny Masoivohon'i Etazonia  any Bahrain ihany koa izy, nanofahofa ireo sainan'ny ISIS.
Tsy mahagaga io firoboroboan'ny sekta io — lasa pôlitika tsy ambara ampahibemaso fa tohanan'ny fanjakana io. Araka ny nambaran ‘i Nicholas, ilay mpanao gazety ao amin'ny New York Times, hoe:
Tamin'ilay vonomoka tao Dalwa  tany Al Ahsa vao haingana, tany amin'ny faritra Atsinanan'i Arabia Saodita, lehilahy telo izay nambara fa niady tany Syria ho an'ny Al Qaeda no nanokatra ny fifampitifirana tamin'ny vondrona Silamo Shiita, nahafatesana olona dimy. Afaka novolavolaina tsara tany Bahrain io fanafihana io. Tsy ela akory taorian'ilay herisetra, nanapaka hevitra ny hifanome tànana indray tamin'ny ISIS  ny Al Qaeda, ary imbetsaka mihitsy tany aloha no nisamborana ireo Bahrainis tany Saodita  noho ny fiketrehana fanafihana mifandray amin'ny Al Qaeda.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/29/65966/
 fihetsiky ny governemanta izay zatra nampangina ireo mpikatroka mafana fo miady ho an'ny demokrasia ao Bahrain: https://globalvoicesonline.org/2014/10/21/gv-face-in-conversation-with-the-activist-bahrain-doesnt-want-us-talking-to/
 lahatsary iray ao amin'ny YouTube: https://globalvoicesonline.org/2014/10/01/isis-recruits-fan-bahrains-sectarian-flames-with-youtube-call-to-arms/
 ireo mpitoraka bilaogy: https://globalvoicesonline.org/2014/11/11/prison-in-bahrain-a-tale-of-torture/
 ireo mpiaro ny zon'olombelona: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/10/02/bahrains-prominent-human-rights-activist-arrested-for-criticizing-police-defectors-who-joined-isis/
 namoaka ny votoaty manohana ny ISIS : https://www.youtube.com/watch?v=92JslpqFD3g
 lietnà kolonely: https://bahrainforums.com/vb/showpost.php?p=12865526&postcount=10
 Barhaini mpiaro ny zon'olombelona: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/29/why_is_bahrain_outsourcing_extremism_isis_democracy
 fanaovana haza lambo: https://globalvoicesonline.org/2014/08/02/electronic-witch-hunts-in-bahrain-israel-and-the-isis/
 fanapotehana ireo trano fivavahan'ireo Shiita: http://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_Shia_mosques_during_the_2011_Bahraini_uprising
 fanadrohadroana ary fanompàna avy amin'ireo hery mpitandro filaminana: https://www.youtube.com/watch?v=1bz8C__As68
 fihetsiketsehana teo anoloan'ny Masoivohon'i Etazonia: https://www.youtube.com/watch?v=7CKv56mqPBU
 vonomoka tao Dalwa: https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/ali-aljamri/saudi%27s-husseiniya-massacre-sectarianism-coming-home-to-roost
 nanapaka hevitra ny hifanome tànana indray tamin'ny ISIS: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-and-alqaida-agree-to-end-fighting-and-join-against-their-opponents-9859999.html
 nisamborana ireo Bahrainis tany Saodita: http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/5/230610.htm